Real Madrid oo la Dhibtooneysa Xaalado Dhaawac EEG Imisa Xiddig ayay Weyneysa Kulanka Real Betis – Gool FM
( Madrid ) 12 Jan 2019. Real Madrid ayaa qaab xun ku bilaabatay sanadka cusub ee 2019 kaddib guuldarro xanuun badan oo ay garoonkooda kala kulmeen Real Sociedad.
Qasaaradaas ayaa Los Blancos uga dhigan iney haatan ku jiraan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka iyagoo 10-dhibcood ka dambeeya hogaamiyaasha Barcelona.
Kooxda Solari ayaa guul la’aan labadii kulan ee u dambeysay horyaalka waxayna ka heleen cayaarahaas dhibic kaliya waana dheeshii ay barbaraha la galeen Villareal kulan qaabi u ahaa.
Madrid oo dabayaaqadii sanadkii tagay markii seddaaxaad ku guuleysatay koobka kooxaha adduunka ayaa la talaacaleysa dhawaacyo dhawra.
Tan iyo 31-kii December, Real Madrid waxaa ka dhaawacmay shan cayaariyahan kuwasoo qolka daaweynta kula biiray Marco Asensio, waxayna midaa yareeneysaa cayaariayahanada uu kulanka soo aadan xulan doono Santiago Solari agar ahaan dheeshi beri ee Real Betis.
Xiddigaha ka dhaawacan ayaa kala ah: Gareth Bale, Asensio, Toni Kroos, Marcos Llorente, Thibaut Courtois, iyo Mariano.
Intaa waxaa sii dheer in kulankaa uu ganaax ku maqan yahay Lucas Vazquez halka sida macquul ay tahay inuu isna xanuun hergab ah ku seegi doonaa cayaartan da’yarka Vinicius Junior, kasoo ka maqnaa tababarkii Jimcaha.